LibreELEC 9.2.0 (Leia) yave kuwanikwa, ikozvino zvichibva paKodi 18.5 | Linux Vakapindwa muropa
LibreELEC 9.2.0 (Leia) yave kuwanikwa, ikozvino zvichibva paKare 18.5
Iyo Raspberry Pi inotipa mikana yakawanda. Kutaura zvazviri vhiki rino takazivisa kuti ichazokwanisa kuendesa Ubuntu Kubata, kunyanya muiyo RP3 uye kana tikashandisa yepamutemo 7 XNUMX yekubata pani. Kumwe kwekushandisa kwatinogona kukupa iko kuishandura kuita set-yepamusoro bhokisi, iyo inoshanda sisitimu iri yakasarudzika Kodi kwairi, kuwedzera kune maaddons uye nezvose zvakajairwa, zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kuiswa. Iyo inoshanda sisitimu yakaburitsa vhezheni itsva maawa mashoma apfuura, iyo LibreELEC 9.2.0.
Kodi 18.5 yakaburitswa mazuva mashoma apfuura, rinenge vhiki rapfuura. Tichifunga kuti iyi sisitimu yekushandisa yakavakirwa pane software yaimbozivikanwa seXBMC, hazvishamise kuti vanga vari "nekukurumidza" uye vaburitsa chishandiso chitsva zvichienderana neshanduro yazvino ye Guvva. Uye ndeyekuti yakasarudzika yakasarudzika yeavo akaisirwa muLibreELEC 9.2.0 ndeyekuti yave zvichibva paKare 18.5 Leia.
LibreELEC 8.2.2 "Krypton" yakaburitswa nerutsigiro rwemafirimu e3D
LibreELEC 9.2.0 (Leia), iyo yekupedzisira vhezheni yasvika yakavakirwa paKodi v18.5, vhezheni 9.2 ine zvakawanda shanduko uye kugadzirisa kune mushandisi ruzivo uye kudzokororwa kwakazara kweiyo yepasi inoshanda system kernel yekuvandudza kugadzikana uye kuwedzera iyo Hardware rutsigiro ichienzaniswa kune LE vhezheni 9.0.
Pakati pezvinhu zvitsva zveiyi vhezheni, timu yekuvandudza inosimbisa kuti rutsigiro rwema webcam rwakavandudzwa, ivo vakawedzerwa Raspberry Pi 4 zvinowedzera uye firmware updater yakawedzerwawo iyo RP4. Ivo zvakare vanotaura imwe shanduko yeiyo yazvino vhezheni yebhasibheri bhodhi: Kubva paLibreELEC 9.1.002, zvinodikanwa kuwedzera iwo mavara "hdmi_enable_4kp60 = 1", isina makotesheni, kune iyo config.txt faira kana tichida kushandisa iyo. 4K kuburitswa kweDP4. Usati wafanirwa kushandisa imwe kodhi iyo yave kushanda.
LibreELEC yave kuwanikwa kurodha pasi kubva Iyi link. Kana chinangwa chako chiri chekuisa kuburikidza neyepamutemo Raspberry chishandiso (NOOBS), uchafanirwa kumirira mazuva mashoma kusvikira yagadziriswa. Kana iwe ukaisa LibreELEC 9.2.0, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » LibreELEC 9.2.0 (Leia) yave kuwanikwa, ikozvino zvichibva paKare 18.5
Ndokumbirawo uzive kana ichigona kuiswa pane Odroid xu4? Ndatenda
Iyo Librem 5 inozivisa kumwe kunonoka mukutakura
Iyo Linux kernel 5.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo